CamScanner အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
6.2.0.2110102000 for Android
4.7 | 100,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（90.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် CamScanner - PDF Scanner App Free
အခမဲ့ Scanner app ကိုရှာဖွေနေပါသလား။
Camscanner သည်သင်၏စက်ကိုအလိုအလျောက် (OCR) ကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အစွမ်းထက်သောအိတ်ဆောင် scanner တစ်ခုသို့ဖွင့်ပေးပြီးသင်၏အလုပ်နှင့်နေ့စဉ်ဘဝတွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ PDF, JPG, JPG, စကားလုံးသို့မဟုတ် txt formats များတွင်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုဖြည့်ဆည်းရန်ဤစကင်နာအက်ပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။
သင်၏ရုံးခန်းတစ်ခုလုံးကိုသင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ တင်. သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ပေးလိုပါသလား။
သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရန် Camscanner features များကိုအသုံးပြုပါ။ Goodbye ကို Goodbye ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးယခု Ultra-firm scanner app ကိုယခုအခမဲ့ရယူပါ။
* Camscanner Scanner အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း 200 ကျော်ရှိသည့်ပစ္စည်းသန်း 500 ကျော်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်နေ့လျှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
* လျင်မြန်စွာဒီဂျစ်တယ်စာရွက်စာတမ်းများ> ကဒ်စာရွက်စာတမ်းများ, ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ, ငွေတောင်းခံလွှာများ, ငွေတောင်းခံလွှာများ, လက်မှတ်များစသည်တို့ကိုလက်မှတ်များစသည်တို့ကိုဖွင့ ်.
Extract Texts Image မှ OCR (Optical Claid Compression) အင်္ဂါရပ်သည်စာရွက်စာတမ်းများဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများရှိစာသားများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရှာဖွေခြင်း, တည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မျှဝေခြင်းအတွက်ပုံရိပ်များမှထုတ်ယူသည်။ (ပရီမီယံသာ)
* ဝေမျှခြင်း PDF / JPEG ဖိုင်များသည်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ PDF သို့မဟုတ် JPEG ဖိုင်များကို PDF သို့မဟုတ် JPEG format များကိုအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။ Social Media တွင်တင်ရန်,
* Airprint & FAX စာရွက်စာတမ်းများ
Airprint မှတစ်ဆင့်အနီးအနားရှိပရင်တာနှင့်အတူ Camscanner Scanner app တွင်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုချက်ချင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ အက်ပ်မှနိုင်ငံပေါင်း 30 ကျော်ကိုတိုက်ရိုက်စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဖက်စ်သို့တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ပါ။
သင့်တွင်စာရွက်စာတမ်းများများများရှိပါက၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရန်နှင့်အလွယ်တကူရှာဖွေရန် tags များကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Search အတွက် OCR သည်ရုပ်ပုံများနှင့်မှတ်စုများအတွင်းရှိစာသားများကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။ သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးကိုသာရိုက်ထည့်ပါ, သင်လိုချင်သောစာရွက်စာတမ်းကိုသင်လျင်မြန်စွာရှာနိုင်သည်။ (မှတ်ပုံတင်ဆောင်သူများသာ)
သင်လျှို့ဝှက်သောအကြောင်းအရာများကိုကာကွယ်လိုပါကအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုရန် passcode ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Document download link ကိုပို့ရင်းအခြားသူများကိုမမြင်ရစေရန်လျှို့ဝှက်ထားရန်စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
* ပလက်ဖောင်းများအပေါ်ထပ်တူပြုခြင်း) ကိုဆက်သွယ်ရန် Sync လုပ်ပါ။ မည်သည့်စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက် (သို့) ကွန်ပျူတာကိုသာဝင်ပါ (www.camscanner.com သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ။ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏စကင်နာအက်ပ်ဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်း, တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။ (ကျောင်းသူ0န်ဆောင်ခ)
အကန့်အသတ်မဲ့0င်ရောက်ခွင့်0င်မှု0င်ရောက်ခြင်း)
app features အားလုံးတွင်အကန့်အသတ်မရှိရယူရန်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
သည်အပတ်စဉ်, လစဉ်, သုံးလပတ်, Subscription Planbr>
သည်0ယ်ယူရန်အတည်ပြုချက်ကို Google Play Store သို့ငွေပေးချေမှုကိုကောက်ခံပါမည်။ * လက်ရှိကာလမကုန်ဆုံးမီအနည်းဆုံး 24 နာရီအပြီးတွင်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းမဟုတ်ပါ လက်ရှိကာလမကုန်ဆုံးမီ 24 နာရီအတွင်းသက်တမ်းတိုးရန်အားသွင်းသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည်ရွေးချယ်ထားသောအစီအစဉ်အပေါ်မူတည်သည်။ * subscriptions များကိုအသုံးပြုသူမှစီမံနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူအားအသုံးပြုသူအကောင့်ချိန်ညှိချက်များသို့0ယ်ယူပြီးမည်သည့်အသုံးမပြုပါ အသုံးပြုသူသည် subscription ကို0ယ်ယူသောအခါသင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကြားရသောအခါ [email protected]
@Camscanner @Camscanner @ Camscanner
ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆက်တွဲ Google: Camscanner
ဘာအသစ်လဲ CamScanner - PDF Scanner App Free 6.2.0.2110102000
How to use Camscanner to make PDF
Top5Best & Free Scanner Apps for Android | CamScanner Alternatives in 2019 | Guiding Tech
Cam Scanner Sinhala 2020 | Documents to PDF | Mobile එකට අවශ්‍යම App එකක්
How to Use CamScanner (2020) | CamScanner Tutorial
How to scanadocument and make PDF in iPhone or iPad
Virus Hunter 2021: Virus Scanner & Phone Cleaner
HTET HTET CHAY
jilla Stay safe